မောင်စေတနာ: Photo Slide Show
Photo Slide Show နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေး တစ်ခု ရခဲ့တယ်။ မိမိတို့ သုံးနေတဲ့ Window Movie Maker နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါလေးက Professional လို့ ပြောရမယ်။ လုပ်နည်း စာအုပ်လေးပါ ထည့်သွားပေးထားတယ်။ မိမိလုပ်တာတော့ ဟုတ်ဘူး။ ဟီး။
Install လုပ်စရာ မလိုဘူး။ Portable ဆိုတော့ ပိုကောင်းတယ် ဆိုရမယ်။ သုံးကြည့်ရင်းမှ အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်တယ်။ လုပ်နည်းတွေ များလို့။ လိုအပ်သူများအတွက် သတိတရ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။ ကဲ ဓါတ်ပုံနဲ့ သီချင်းစာသားတွဲဖက်၍ အလှဆင်နိုင်ကြပါစေ။
Thanksamillion my dear!!!
Be peace and happy! ...:)
အကြိုက်တွေ့ သူ said...
အရမ်းမိုက်တယ်ဆရာရေ့ နောက်လည်းများ၂တင်ပေးနိုင်ပါစေကူးဖို့ ကတော့အဆင်သင့်ပါအမြဲအားပေးအုံးမှာ
9:11 PM, January 12, 2010
အကို စေရေ ကျတော်က ပုံတွေပေါ်မှာ မြန်မာစာရေးတာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျန်တာ တတော့ အိုကေတယ်ဗျာ့။
4:07 PM, September 20, 2010
font တွေ အကုန်သုံးကြည့်ပါ။ လက်ခံတဲ့ ဖောင့်ကို သုံးစေချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ
5:22 PM, September 20, 2010
Khin Aye said...
down လို့ရတော့ဘူးဆရာ ပြင်ပေးပါဦး
5:38 PM, April 19, 2015
2:44 AM, May 23, 2017